"Mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny Fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Iray ny tena, ary iray ny Fanahy, dia toy ny niantsoana anareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo" - Efes. 4:3,4.
Hiara-miasa amin'ny olombelona izay fitaovana efa voahosotra ny Fanahy Masina, satria izany no sitrak'Andriamanitra. Efa nanokatra varavarana manelanelana ny lanitra sy ny tany Andriamanitra ary tsy misy hery mahakatona izany. Miantso ny olon-drehetra mba ho madio Izy, ho masina, ho voatokana, mba ho tontosa ny asa ho amin'izao fotoana izao. Rehefa miezaka mampifandray ny tenany amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa araka ny tokony ho izy ny vahoakan'Andriamanitra, dia harotsaka amin'ny fahafenoany ny Fanahy Masina mba hampikambana amim-pirindrana ny tena iray manontolo.
Tsy misy zavatra hita fa mampaharefo ny fiangonana ankoatra ny fisaratsarahana sy ny fifandirana. Tsy misy na inona na inona manohitra an'i Kristy sy ny fahamarinana tahaka izany toe-tsaina izany. "Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy" - Mat. 7:20. "Moa ny loharano va mamoaka rano mamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany? Ry rahalahiko, ny aviavy va mety mamoa voan'oliva, na ny voaloboka mamoa voan'aviavy? Toy izany ny rano masirasira tsy mba ivoahan'ny mamy. Iza eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana? Aoka hasehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahin'ny fahendrena" - Jak. 3:11-13.
"Koa hatanjaho ny tànana miraviravy sy ny lohalika malemy; ary manaova lala-mahitsy halehan'ny tongotrareo, mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa, fa ny mba hahasitrana azy kosa. Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo. Ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra; fandrao hisy faka mangidy mitsimoka hampikorontana ka ho voaloto ny maro" - Heb. 12:12-15.
Raha mbola eto amin'ity izao tontolo izao ity isika dia tsy maintsy mifandray amin'ny hafa. Mifamatotra sy mifaningotra ny samy olombelona. Amin'ny maha-Kristianina antsika dia samy rantsana avokoa isika rehetra. Izany no naharian'ny Tompo antsika, ary raha sendra tojo fahadisoam-panantenana isika dia tsy tokony hieritreritra ratsy ny hafa. Rantsana mitokantokana mandrafitra tena iray isika. Ao anatin'ny fahasahiranana sy ny fahadisoam-panantenana no iadiantsika ny adin'ny fiainana, ary notendren'ny Tompo ho zanany lahy sy vavy isika, izay nantsoiny hoe sakaizany ihany koa, mba hifanampy. Tokony ho tafiditra ao anatin'ny asa kristianina fanaontsika izany. — ST, 7 Feb. 1900.